वाणिज्य बैंकहरुले २०७४।०७५ मा कति खुद नाफा कमाए ? आँकलन सहित |
वाणिज्य बैंकहरुले २०७४।०७५ मा कति खुद नाफा कमाए ? आँकलन सहित
सेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा गरेको नाफा कमाईको बिवरण पस्कने क्रम बुधबारबाट सुरु भएको छ । उनीहरुले अपरिस्कृत बित्तीय बिवरणहरु सार्वजनिक गर्दै गर्दा वाणिज्य बैंकहरुले कति खुद नाफा कमाए भन्ने चासो लगानीकर्तामा सर्वाधिक छ । उनीहरुको यही चासोलाई सम्बोधन गर्दै मेरो लगानी प्रस्तुत गर्दछ (२८ वाणिज्य बैंकहरुले गरेको खुद नाफा कमाईको आँकलन)
२ वटा वाणिज्य बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब माथि
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कमाईका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पहिलो स्थानमा बसेको थियो । यस पटक भने वाणिज्य बैंकलाई नबिल बैंकले पछि पार्ने आँकलन गरिएको छ । उल्लेखित २ बैंकले ४ अर्ब बढी खुद नाफा कमाएका छन् ।
२ वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब भन्दा बढी खुद नाफा कमाएको बित्तीय बिबरण प्रकाशनको तयारी गरिरहेका छन् । त्यसै गरी ३ अर्ब रुपैंया खुद नाफा गरेको वित्तीय विबरण प्रकाशन गर्ने तयारीमा ३ वटा वाणिज्य बैंक जुटेका छन् । २ अर्ब रुपैंया खुद नाफा गर्ने बैंकको सूचीमा ४ वटा वाणिज्य बैंक परेका छन् ।
कृषि बिकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र नेपाल बैंक पनि ३ देखि ४ अर्बको बिचमा खुद नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा पर्ने चित्र देखिएको छ ।
त्यसपछिका ४ वाणिज्य बैंकहरुले आफुलाई २ अर्ब माथिको आकर्षक कमाई गर्ने सूचीमा उभ्याउने संभावना देखिएको छ । यसमा एभरेष्ट, हिमालयन, ग्लोबल आईएमई र एनएमबि बैंक परेका छन् ।
डेढदेखि २ अर्ब कमाई गर्ने बैंकको सूचीमा ५ वाणिज्य बैंक परेका छन् भने १ देखि डेढ अर्ब कमाई गर्नेको सूचीमा सबैभन्दा धेरै अर्थात १० वाणिज्य बैंक परेका छन् ।
एक अर्बभन्दा थोरै कमाई गर्ने बैंकको संख्या ४ हुने आँकलन गरिएको छ । केही बैंकहरुलाई गत बर्ष भएको लगानी योग्य रकमको अभाव र ब्याजदर बृद्धिले केही हदसम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ । समग्रमा बैंकहरुको कमाईलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।
– सच्याइएको : उल्लेखित तथ्यांकमा सेञ्चुरी बैंकको खुद नाफा ९० करोड हुनुपर्नेमा तथ्यांक प्रवृष्ट गर्दा ६० हुन गएकाले सच्याइएको छ ।
आंकलन गर्दाका आधारहरु
सम्बन्धित बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बद्ध स्रोतहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानी, अघिल्लो बर्ष र तेस्रो त्रैमासको बित्तीय बिबरणसँगको तुलनात्मक अध्ययन र अन्य सूचनाहरुका आधारमा यो आँकलन प्रस्तुत गरिएको छ । साथै मेरोलगानीको डाटा एनालिटिक्सले पनि यो आँकलन तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
सूचनाको गोपनियता र त्यसले दोस्रो बजारलाई प्रभावित नपारोस भन्ने कुरालाई बिशेष ध्यानमा राखी साउन २ गते बुधबार बिहान ११ बजेदेखि सूचना संकलन तथा प्रशोधनको काम सुरु गरेर बुधबार बेलुका ८ बजे नै मेरोलगानीमा समाचार प्रबाह गरिएको छ ।
बैंकहरुले साउन महिनाको केही दिनको हिसाबलाई गत बर्षको चौथो त्रैमासमा समाबेश गर्न पाउने हुनाले अहिले यहाँ प्रस्तुत गरिएको आँकलनमा केही फरक पर्न सक्ने संभावना छ । बित्तीय बिबरण तयारीको क्रममा खराब कर्जा वापतको रकम ब्यवस्था बढ्न गएमा आँकलन गरिए भन्दा कम खुद नाफा हुनसक्छ । साथै राष्ट्र बैंकले वित्तीय विबरणका सम्बन्धमा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार केही बैंकले वित्तीय विबरण प्रकाशनको तयारी गरेका छन् । त्यस्तो भएको खण्डमा आँकलनमा केही फरक पर्न सक्छ ।
लगानीकर्ताहरुले यहाँ प्रस्तुत गरिएको आँकलनलाई आधार मानी सेयर कारोबार नगरी कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने आधिकारिक बित्तीय बिवरण नै पर्खनु उचित हुनेछ । यसलाई अध्ययन बिश्लेषणको सामान्य आधार मात्र बनाउन सकिन्छ ।
Previous Previous post: इन्टरनेटमा कालोबजारी ! सरकार भन्छ- मूल्य बढाउनेलाई कारवाही गरिन्छ
Next Next post: नेप्सेको वेवसाइट नचल्दा घटिरहेको सेयर बजार थप प्रभावित